သင့်ကုမ္ပဏီ၏ပုံပြင်တွင်ဤအချက် ၅ ချက်ပါဝင်သလား။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 22, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်၊ ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှစ်သက်ပေမယ့်ငါအတော်လေး hack ။ ထိုအခါငါနေ့စဉ်အပေါ်ရေးပါ Martech Zone ငါရေးသားပါတယ် Dummies များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစာရေးသူအဖြစ်မသတ်မှတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကြီးကျယ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်အားလွင့်စင်သွားစေ။ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရေးအသားကိုနှစ်သက်သည်။ ငါတို့အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဆိုဒ်အသစ်တခုကိုဖွင့်လိုက်တယ် DK New Mediaဒါမှဒီအကြံဥာဏ်က စဉ်းစား ငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဘယ်လိုဝေမျှနိုင်မလဲဆိုတာကိုအချိန်ကောင်းပဲ။ ကျနော်တို့ကသူတို့အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာ!
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အစမရှိဘူးလား။ စိတ်မပူပါနဲ့ လှည့်ကွက်ကလူတွေကိုအဆုံးအထိဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတခုကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာငါးမျိုးသည်သင့်ကိုထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိစေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်းပြောပြမြေပုံသည်သင့်အားလမ်းလျှောက်ပြီးအသစ်သောအရင်းအမြစ်ဘဏ်၏တည်ထောင်ခြင်း၊ ရူပါရုံနှင့်ရည်မှန်းချက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်နှင့်အတူသူတို့ကိုသရုပ်ဖော်သည်။
အဆိုပါ ကြီးစွာသောကုမ္ပဏီပုံပြင်ငါးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင် သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောတန်ဖိုးကိုဖော်ပြရန်၊ သင်၏ပရိသတ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်၊ သင်၏အောင်မြင်မှုများပါဝင်ရန်၊ သင်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဝေမျှရန်၊
စက်တင်ဘာ 23, 2014 မှာ 9: 39 AM
အပေါ်ဂရိတ်ရှာဖွေနေဒီဇိုင်း DK New Media, Doug!
23:2014 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 19 မှာ